Ama-Platform e-Popular Popular Job Job e Dubai | Isiqondiso se-Expats
Izingxenyekazi Eziyishumi Zokufuna Umsebenzi Eziyishumi ku Dubai okukusiza ukuba uthole umsebenzi.
I-Dubai, inhlokodolobha yezentengiselwano ye I-United Arab Emirates yaziwa ngempilo yayo kanokusho, ikhwalithi yokuphila, ukuphepha, izakhiwo kanye nokubekezelelana ngokwenkolo.
Ukulinganisa izifundo ezahlukahlukene ezifana nalezo ze-Insead Alumni Association of France Dubai njengoba Idolobha elilodwa emhlabeni ukuze aphile futhi asebenze. IDubai isibe yikhaya lesibili labachazayo abaningi abahlala futhi basebenze kule ndawo yokwamukela umkhathi Emirate.
Ngabe ucabanga ngokuthuthela eDubai ngomsebenzi, vele uhlala eDubai nokulungiselela okulandelayo umsebenzi hambisa, noma umfundi ufuna ukungena emakethe yemisebenzi?
Nazi amapulatifomu ayishumi athandwayo hhayi ngokulandelana okuzokusiza ekutholeni okulandelayo umsebenzi wamaphupho e Dubai.
I-LinkedIn yi networking ngobukhulu global isiza futhi ethandwa kakhulu futhi. Njengengosi yokuxhumana nabantu, ixhumanisa abantu emhlabeni jikelele iningi labaqashi kanye abafuna umsebenzi. Ukuze usebenzise i-LinkedIn, udinga ukubhalisa futhi wakhe iphrofayili yakho. Uma lokhu sekwenziwe, manje usungaqala ukuxhumana nabantu. Imvamisa, i-LinkedIn izophakamisa abantu ukuthi baxhunyaniswe ngokususelwa kuphrofayela yakho. To qala ukufuna imisebenzi, thola isithonjana se- "Jobs", thayipha endimeni yakho yomsebenzi nendawo yakho bese uqala ukusesha.
Kunezinketho ezimbili zokusebenzisa kalula: nge-LinkedIn ngokuzenzakalela ukuhlanganisa iphrofayela yakho ephelele kumqashi ngokuchofoza, noma ukuqondisa kabusha kwisayithi yangaphandle lapho ungasebenzisa ngokufanayo indima efanayo. Ungakwazi futhi thola imisebenzi ngqo kumakhasi eNkampani, Ochwepheshe Bezinsizakalo Zabantu, noma ekhasini lezinkampani Zokuqasha bonke abangenza othintana ngqo ukuhambisa ama-CV nama-Resumes. Insiza ye-LinkedIn Premium futhi ikuvumela ukuthi uthintane nabanye abaqashi ngokuqondile futhi inikeza ukuphakama okuphezulu kokubonakala kwemisebenzi esetshenzisiwe.
Kubalulekile futhi ukwakha inethiwekhi efanelekile nabantu abakwinkambu yakho ehlobene nabo noma labo ababeka okuthunyelwe njalo ukusiza abafuna umsebenzi.
Ngaphandle kwemisebenzi efuna umsebenzi, kunokuningi okuthunyelwe nezindatshana ezabiwe ngabantu, izinkampani namaqembu ezingaba wusizo empilweni nasekuqhubekeni phambili komsebenzi.
LinkedIn Umsebenzi eDubai
Ngempela isiza sokuqashwa emhlabeni wonke inikeza ipulatifomu yokuthi abaqashi bathumele imisebenzi yabo, kanye nalabo abafuna umsebenzi ukufaka izicelo zale misebenzi. Abafuna umsebenzi bangabhalisa kwiwebhusayithi noma balande uhlelo lwabo -Google Dlala ku-Android noma ku-App Store kumadivayisi we-iOS. Uma usubhalisile, uzocelwa ukuthi ugcwalise iphrofayili yakho futhi Layisha i-CV yakho noma Qalisa kabusha. Ngemuva kwalokhu usukulungele futhi uzimisele ukufaka isicelo somsebenzi wakho ku-Ngempela; konke okudingeka ukwenze ukuze uchofoze 'Faka isicelo' futhi iphrofayela yakho izokwabiwa ngokuzenzakalela nomqashi, noma iqondiswe kabusha kusayithi lomsebenzi lapho ungafaka isicelo sendima efanayo.
Ukuthola indima yakho oyifunayo, uzodinga ukusesha igama elingukhiye nendawo, futhi yonke imisebenzi ekuleso sigaba izokhonjiswa futhi igcinwe ngokuzenzakalelayo kwisethingi yakho yephrofayela yokusesha kalula ngokuzayo. I-shop.com iyindawo yokufuna umsebenzi yamahhala, futhi ungathola izindima zomsebenzi ezikhangisiwe kuyo yonke imikhakha nezimboni. Kunesigaba sokubuyekezwa kweNkampani lapho ungathola khona ngqo ulwazi ngokusebenza kweNkampani emakethe yezabasebenzi, imiholo kanye imisebenzi evulekile.
Impela-Izindawo Eziyishumi Ezingamasha Ezifunayo Zokufuna UJobe e Dubai
Bayt LENA ngenye yezinto okuholela online search umsebenzi inthanethi eMiddle East naseNyakatho ne-Afrika. Le pulatifomu ibonakale isebenza kakhulu ekudaleni amathuba wokuxhuma abaqashi kanye nalabo abafuna umsebenzi. Kunezindima ezahlukahlukene zomsebenzi ezikhangisiwe UAE Izizwe, imisebenzi yeFreshers / Ukungena kwamazinga, Mid, Senior and Expert level, Imisebenzi ephethe kanye nemisebenzi yeNgxenye yesikhashana. Ngokungena ngemvume kwiwebhusayithi yabo nangokubhaliswa kwamahhala, ungaqala ukufaka isicelo semisebenzi. Kukhona futhi nenketho yokwakha i-CV yakho esizeni ngokukhethwa kwe ukwenza iphrofayili yakho ibe esidlangalaleni kubaqashi ukwandisa ukubonakala.
Okwalabo ababukayo ngezinsizakalo zokubhala i-CV, I-Bayt.com inikeza lokhu ngokukhokhisa ngqo kwiwebhusayithi yabo enezinketho zokuhumushela olimini lwesi-Arabhu, engeza i-Cover Letter bese wakhe iphrofayela yakho ye-LinkedIn. Ngaphezu kwalokho, kukhona isigaba se-blog kuwebhusayithi enikezela ngamathiphu nezinsizakusebenza ku- ukufuna umsebenzi, ukukhula kwamakhono nolwazi lwemakethe.
Kulabo abangafuni ukushintsha umsebenzi ngokushesha, kunendlela yokuthumela ama-CV ku-database ye-Bayt.com engatholakala kuma-recruiters kanye nezinkampani.
Bayt.com - Izindawo eziyishumi ezikhangayo zokufuna ama-Job Job Platforms e Dubai
IDubizzle yiyona okuholela ku-online classified platform ku-UAE. Iwebhusayithi inesigaba esithi 'Imisebenzi' lapho abafuna umsebenzi bangasesha futhi bathole khona imisebenzi. Konke okudingayo ukubhalisa i-akhawunti nge-Dubizzle, ungene ngemvume, ulayishe i-CV yakho futhi uyisebenzise ideshibhodi yakho ukuphatha ukusesha kwakho komsebenzi. Phambilini bekuyimahhala abaqashi nabaqashi ukuba bathumele imisebenzi esizeni. Selokhu inkampani iqale insizakalo ekhokhelwayo mayelana nalokhu, kube nokumbalwa okuthunyelwe kwemisebenzi, kodwa kungaqinisekiswa bafaka isicelo somsebenzi okhona njengoba kube nokucaca okuningi okungeziwe ekuthembekeni kwesiza.
Ungasesha imisebenzi emisha nsuku zonke yiNkampani, uMkhakha noma Indawo kuwo wonke amazinga emisebenzi kanye nezindima zesikhathi esigcwele noma ingxenye yesikhathi. Kukhona blog isigaba ekhasini elinemibhalo efakiwe ukufuna umsebenzi kanye nokwenza umsebenzi phambili.
I-Gulftalent ingumhlinzeki wokusiza umsebenzi oqashwe eDubai kanye no ukuhlinzeka ngezinsizakalo eMiddle East kanye nesifunda se-Gulf kanye neNyakatho Afrika. Ngokubhalisa kwiwebhusayithi yabo, ungalayisha i-CV yakho bese wakhe iphrofayili yakho yobungcweti be-Gulf Talent online ngokunikeza lonke ulwazi olufanele oluhlobene nokusesha kwakho umsebenzi.
I-Gulf Talent ayinikezi izinkampani kuphela indawo yokukhangisa imisebenzi yazo kodwa futhi iningi izikhungo zokuqasha Umthombo we-CV wabantu abafuna umsebenzi (ongakukhetha) ngokusebenzisa imininingwane yabo. Ngokubhalisa, kukhona i inketho yokuthola izexwayiso zomsebenzi ezifanele kanye nokubuyekezwa kwe-CV mahhala. Abafuna umsebenzi bangathola nezinsizakalo zabo zokubhala ze-CV nezinsizakalo zokuqokomisa iphrofayli ngokukhokha. Izinsiza ezahlukahlukene ezinjengezifundo, imininingwane yamaholo nokucwaninga kwemakethe yezabasebenzi kungatholakala kuwebhusayithi futhi.
Amaphephandaba yi indlela ethandwayo yokuthola imininingwane ngezikhala zomsebenzi eDubai ku-inthanethi nakokuphrintiwe. Amaphephandaba amaningi e-UAE anezigaba ezinikezelwe ekukhangisweni izithuba zemisebenzi.
Isikweletu: Khaleej Times
I-Gulf News abafundi uzothola izikhala zomsebenzi ezintsha ekhasini labo le-Classified kanye nolwazi lomsebenzi wabo esigabeni sabo 'seNgqesho'. I-portal Getthat.com yabo eku-inthanethi inesigaba esizinikezele lapho abafuna umsebenzi bangabhalisa futhi bafake izicelo zemisebenzi.
Khaleej Times iphephandaba, i-UAE ende kunazo zonke esebenza isiNgisi nsuku zonke futhi inikeza uhlu lwemisebenzi esigabeni wokuphrinta kwayo. Buzzon ukuthenga kwabo futhi kuthengisa ingosi ye-inthanethi enesigaba esithile sokufuna umsebenzi. Lapha, abafuna umsebenzi bangathola imininingwane enemininingwane ngendima ekhangisiwe nolwazi lokuxhumana ongalusebenzisa.
Al Waseet etholakala ngokuprinta futhi online has Isigaba 'semisebenzi lapho abafuna umsebenzi bengathola khona imininingwane ngesiNgisi nangesi-Arabhu ngemisebenzi etholakalayo kufaka phakathi nokuthi ungayifaka kanjani futhi kuphi.
I-Read is a free infotainment iphepha elishicilelwe masonto onke futhi liyatholakala kuzo zonke izikhungo zeDubai Metro. Futhi-ke, ohambweni lwakho olulandelayo kwi-Dubai Metro, ungahle ukhethe ikhophi bese uthola izikhangiso zemisebenzi ekhasini le-'Classified 'le Ukufunda noma ukuthola amathiphu emisebenzi kwi-portal yabo ye-intanethi.
I-Laimoon yi iwebhusayithi yomsebenzi exhumanisa abaqashi nabasebenzi ngokuqinisekisa ukuphendula kwabenzi bezicelo emsamo wabo. Kuyisiza samahhala kubo bobabili abaqashi nabasebenzi, ezinze eDubai nezinsizakalo emazweni angaphezu kwamashumi amathathu. Lapho ufuna imisebenzi lapha, kungcono ukufaka isicelo ezinkampanini ze-'Laimoon Verified '. Lokhu kuvame ukuba yimfihlo kepha kuhlolwe futhi kugunyazwe nguLaimoon futhi hlinzeka ngemininingwane egcwele ngeqhaza kubandakanya imininingwane yemholo.
ILaimoon nayo ine isigaba esizinikezele sezifundo lapho ungathola khona ulwazi ezikhungweni ezinikeza ukuqeqeshwa ukuze uthuthukise wena ngokwezifundo. Izinketho zokuzibandakanya ezibandakanyayo nazo ziyatholakala kuzo iwebhusayithi yamaqembu nezinkampani ongathanda ukuthola le nsizakalo.
INaukrigulf isiza somsebenzi sokucinga okuyinto inikeza amathuba eMiddle East ikakhulukazi emazweni aseGulf e-UAE, I-Saudi Arabia, Oman, Bahrain kanye Qatar. Inqubo yokuthola umsebenzi ngeNaukrigulf.com iqala ngokubhalisa mahhala ukwenza i-akhawunti, bese uthumela i-Resume yakho ku-inthanethi. Izinkampani ezimbalwa eziphezulu esifundeni zikhangisa ngezindima zomsebenzi ku-Naukrigulf.com nokunye ungabheka indima yakho oyithandayo ngokuthayipha esigabeni somsebenzi, ikhono, igama, igama lenkampani noma indawo yomdlalo oqondile.
Ikhasi labo lasekhaya linesifingqo Abaqashi Abafakiwe kanye Nabacebisi, Ukusesha kwemisebenzi okuthrendayo, namathiphu wokwenza umsebenzi. Baphinde banikele ngokubhala kabusha futhi baqale kabusha izinsizakalo zokubuka esizeni sabo ngemali ekhokhwayo. Uhlelo lokusebenza lweNaukrigulf lungalandwa ku-Google Play ye-Android, kanye neSitolo se-App samadivayisi we-iOS.
I-Monstergulf ngokufanayo indawo yokucinga yomsebenzi yabantu abafuna umsebenzi ezimakethe ze-UAE, I-Saudi Arabia, I-Bahrain, Kuwait, Oman ne-Qatar kanye namazwe ambalwa e-Asia nase-Far-Eastern. Ngokubhalisa kusayithi mahhala, abafuna umsebenzi bangaxhunywa futhi bafake izicelo zezindima zomsebenzi ezihambelana namakhono abo, isipiliyoni kanye neziqu nezinkampani eziphezulu esifundeni. Imikhangiso yeMonstergulf yemisebenzi kuyo yonke imikhakha futhi kuwo wonke amazinga emisebenzi kufaka phakathi abaphathi kanye nomsebenzi we-Blue-Collar.
Ngemisebenzi yabo yeMonster Career, amaklayenti angashayela izinombolo zawo mahhala e-UAE naseSaudi Arabia noma shiya izinombolo zabo zeselula kuwebhusayithi ukuze ziphinde zibuye. Izinsizakalo ezinikeziwe zifaka Ukubhala Kwe-Professional Resume, Qalisa kabusha Ukuqhakambisa, ne Amaphakethe we-Career Booster ngemali ekhokhwayo.
Ama-internship nama-Fairs fairs
Ukufaka isicelo sokufunda nokuvakasha imisebenzi iyindlela enhle yabafundi yokungena emakethe yemisebenzi e-UAE futhi bathole ulwazi abaludingayo ukuze bathuthukise emisebenzini yabo. Kube nezimo eziningana lapho abafundi abafundela umsebenzi benikezwa amathuba esigcwele nezinkampani ezifanele abaziqeqeshela ukusebenza ngokugcwele. Izikhungo eziningi zemfundo ziye izikhala zomsebenzi lapho Izinkampani zikhangisa khona abafundi, noma kunjalo, iningi lamasayithi omsebenzi angenhla nawo enza okufanayo. Ngenye indlela, uma kunezinkampani ezithile ongathanda ukuzifunda nazo, unga hlola izigaba zomsebenzi yewebhusayithi yabo amathuba e-internship.
ImiSebenzi YemiSebenzi e-Dubai
Ngezikhathi ezithile, kukhona eziningana amakhono okusebenza ahlelwe e-UAE lapho abafuna umsebenzi kanye nabaqeqeshwayo bengaya khona. Kule micimbi, abantu abamele ukhetho bangazitholela mathupha imininingwane Izinkampani eziqasha kabusha, imininingwane yomsebenzi kanye nemininingwane efanelekile kunethiwekhi futhi uhlangane ngqo nabaqashi. Kwesinye isikhathi izingxoxo zingaqhutshwa esizeni, kuya ngeNkampani noma Indima ngakho-ke qiniseka ukuthi uyigqoka ingxenye lapho uya kulawa ma-fairs. Eminye yemikhawulo efana neHVACR Careers Fair ne-AdIPEC Graduate Fairs iyimboni futhi ifuneka ngokuthile ngakho-ke kubalulekile ukwazi ukuthi ilitshe lomcimbi ngaphambi kokuya kulo.
Umbukiso weNational Career Exhibition uvulekile kubo bonke abafuna imisebenzi emikhakheni ehlukahlukene e-UAEkodwa-ke ukubhaliswa kuyadingeka ukuhambela umcimbi. I-CareersUAE kufaneleke ukuthi kube khona abafunelwa umsebenzi okuba seDubai World Trade Center, lapho izinkampani eziphezulu e-UAE zingumbukiso. I-eFair iyinkundla yemisebenzi eku-inthanethi e-Abu Dhabi exhumanisa abafuna umsebenzi nabaqashi. Kukhona izinketho ngesiNgisi nangesi-Arabhu ukubhalisa esizeni.
Ngaphandle kwalezi zingxenyekazi eziyishumi nezindlela, indlela yendabuko ye-Word-of-Mouth nayo ingafakazela lokho iyasebenza ekufuneni kwakho umsebenzi. Njengomgomo wokuphila, uba yilowo ohamba naye ngokuxhumana kangaka nesixuku esifanele uzothola imiphumela ephezulu. Kukhona njalo ukuthi umuntu ozokwazi ngokuvula umsebenzi futhi axhume noma ngincoma kumqashi ofanele. Joyina amaqembu afanele ezisekelweni zeSocial Media ezihlobene nokusesha imisebenzi futhi uhlanganyele emisebenzini yomphakathi. Ukuvolontiya kuyindlela enhle yokusebenzela umphakathi futhi futhi ihlinzeka namathuba okuxhumana kwenethiwekhi.
Various Izinkampani zokuqasha zitholakala eDubai kulabo abafuna umsebenzi ongathanda ukusebenzisa izinsiza ze-ejensi.
Ku: Ama-Platform e-Popular Popular Job Job e Dubai
Kunezinhlobo eziningana izindaba zempumelelo zokuphuma abaqale futhi bathuthukisa okwabo imisebenzi eDubai. Indaba yakho ingahle ifane noma ibengcono ngokuthatha izinyathelo ezilungile zokuthatha umnyakazo olandelayo oshintsha impilo eDubai. Ngikufisela konke okuhle!
Amapulatifomu Ayishumi Okusesha Okuthandwayo eDubai, ngiyathemba ukuthi uyayithanda i-athikili yethu futhi uyakwazi ukuzibheka. Futhi usuyazi manje ukuthi ungawuthola kanjani umsebenzi ngeDolobha elilodwa emhlabeni ukuze uphile futhi usebenze.
Dubai City Inkampani manje ihlinzeka ngemikhombandlela emihle yemisebenzi eDubai. Ithimba lethu lathatha isinqumo sokungeza imininingwane yolimi ngalunye Imisebenzi e-Dubai Guides. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, manje ungathola izinkomba, amathiphu nomsebenzi e-United Arab Emirates ngolimi lwakho.